FIHANAKY NY ARETINA PESTA ETO MADAGASIKARA : Tsy fantatra intsony ny marina
Ny fanambarana ofisialy farany momba ny pesta dia hoe voafehy ity areti-mandoza ity. Ny faran’ny herinandro teo dia fantatra fa matin’ny pesta i Alix Allisop mpanazatra ny ekipan’i Seychelles amin’ny basketball rehefa notsaboina teny amin’ny hopitaly miaramila eny Soavinandriana Antananarivo. 3 octobre 2017
Misahotaka ny olona ankehitriny satria olona tsaboina eny amin’ny hopitaly no voalaza fa maty, nefa milaza ny tompon’andraikitra fa azo tsaboina tsara ity aretina ity. Efa nandrinandry saina ihany koa ny ankamaroan’ny olona taorian’ny fanambaràna fa voafehy ity aretina ity. Tsy misy ihany koa fepetra raisin’ny fanjakana amin’ny fiarovana ny aim-bahoaka sy fiarovana ny aretina tsy hihanaka.
Noho izany dia ny tsirairay no tsy maintsy maka fepetra fa tsy miandry fanjakana. Ny atao voalohany dia ny manadio ny trano sy ny manodidina, manala ny lobolobo sy katsakatsa fiafenan’ny voalavo. Asiana fanafody mamono parasy ihany koa ny biby fiompy sy ny trano ary ny tokotany. Ankoatra izay dia misy fepetra azo raisina ihany koa dia ny fanaovana saron’orona sy vava na ‘masque’ rehefa mivoaka ny trano. Tsy mifandray tanana aman’olona, tsy mifanoroka aman’olona. Ezahina tsy tazomina ireo fitaovana tazomin’ny olona rehetra, rehefa tsy maintsy hitazona dia aleo tazomina amin’ny mosoara taratasy ary sasana ny tanana avy eo na diovina amin’ireny ranon-tsavony fanadiovana ireny. Ezahina ny tsy mandeha amin’ireny toerana be olona na mihiboka ireny araka ny azo atao.
Fantatra fa hanampy ny fitondrana malagasy ny Oms (Organisation Mondiale de la Santé) ka hanome fanafody hitsaboana ny pesta. Homena fitaovana hiarovana ny mpiasan’ny fahasalamana ihany koa, satria dia fantatra fa misy ireo mpitsabo no ifindran’ny aretina pesta, noho izany dia maro ny matahotra ny ainy. Aretin’ny voalavo mifindra amin’ny olombelona amin’ny alalan’ny kaikitry ny parasy mitondra ny otrik’aretina ny pesta. Izay no antony hamonoana ny parasy sy androahana ny voalavo. Rehefa vonoina ny voalavo dia dorana ny fatiny fa tsy ariana fotsiny satria vao mainka mampihanaka ny parasy.
Tsara koa anefa ny mampahafantatra ny rehetra ny fomba fisehon’ny aretina pesta. Fiakaran’ny hafanana tampoka, mangitakitaka, maharary an-doha, maharary ny taolana rehetra, reraka be, mandoa sy te-handoa. Misy karazany telo ny pesta dia ny pesta bubonique, azo avy amin’ny kaikitry ny parasy : io ilay manome atoditarimo. Raha mihombo ny aretina dia lasa pesta septicémique, izany hoe miparitaka amin’ny vatana rehetra hatrany amin’ny havokavoka ny mikraoba. Ny pesta ‘pulmonaire’ io indray dia azo avy amin’ny rivotra avoakan’ny olona voan’ny pesta septicémique. Raha tsy voatsabo dia mahafaty anatin’ny telo andro ny pesta pulmonaire. Tokony tsaboina avy hatrany ihany koa ireo olona nifampikasoka tamin’ny olona voan’ny pesta.
Ilaharana ny fividianana tampim-bava na “masque” eto an-drenivohitra
Mihorohoro fatratra ankehitriny ny mponina eto amin’ny renivohitra Antananarivo noho ny fihanaky ny pesta. Aretin-tratra ka samy niezaka nandray fepetra hentitra momba ny toe-pahasalamany avokoa ny rehetra. Marihana fa nanomboka tamin’ny volana aogositra 2017 lasa teo iny dia efa mahatratra 126 ireo traboina.
Ny 25 tamin’ireo no voalaza fa namoy ny ainy raha ny tatitra voaray avy any amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka . Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana izao dia anisany nampiraiki-tahotra ny besinimaro ny nahafaty ilay vazaha mpanazatra ny taranja baskety avy any Seychelle ny faran’ny herinandro teo sy ny fahenoana fahafatesana zazakey miisa roa tao amin’ny Hopitalin-jazakely Ambohimiandra.
Manoloana izay dia hita teny rehetra teny fa saika ilaharana avokoa ireo fivarotam-panafody sy ny fividianana tampim-bava na “masque” omaly tontolo. Nitondra tampim-bava daholo ireo olona nifamezivezy teny amin’ny toerana be olona toa an’ Analakely sy 67ha ary Isotry ka rehefa nanontaniana ireo olona ireo dia matahotra mafy ity aretina ity. Mora mifindra amin’ny alalan’ny rivotra sy rora, amin’ny alalan’ny marary mikohaka ny pesta, hany ka raiki-tahotra tanteraka ny vahoaka ka miezaka ny manao ny fiarovan-tena. Vao maraina dia efa nilaharana avokoa ireo fivarotam-panafody sy fivarotana rehetra mivarotra ny tampim-bava izay voalaza fa azo iarovana ny fitrangan’ny aretina. Na ireo toeram-pivarotana fanafody tsy manara-dalàna aza. Ankilan’izay dia mahita ny maro fa ny “tandrametaka” sy fanaovana ny asa “tsy matihanina” tamin’ireo mpitsabo ihany no niteraka izao valan’aretina izao .
Midika izany fa tsy mahavaha olana ny fanjakana. Hatreto anefa dia nilaza indray ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa hamoaka isa marim-pototra izy ireo manomboka amin’ity herinandro vaovao ity raha ho an’ny eto an-drenivohitra ihany satria dia misy ireo milaza tsaho fotsiny ka mampihorohoro vahoaka.
Naato ny fidiran’ny mpianatra ao Toamasina I
Ny alatsinainy 2 oktobra no voatondro ho fidiran’ny mpianatra amin’ny fomba ofisialy taom-pianarana 2017-2018 araka ny didim-pitondrana laharana 12869/2017/MEN. Efa saika niditra nianatra talohan’io daty voatondro io ireo mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina sasantsasany. Raha ny zava-nisy tao Toamasina, dia efa nitanjozotra namonjy sekoly ny ankamaroan’ireo mpianatra amin’ny sekolim-panjakana maro ny marainan’ny alatsinainy 2 oktobra .
Tamin’ny 11 ora antoandro ny andron’ny alatsinainy 2 oktobra, naharay vaovao ireo sekoly efa nanokatra efitrano fianarana fa nisy naoty navoakan’ny Cisco Toamasina I. Naoty milaza fa ahatona aloha ny fidiran’ny mpianatra manoloana ny valan’aretina pesta. Voakasik’io naoty io avokoa ny sekoly rehetra ao anatin’ny fari-piadidiam-pampianarana Toamasina I na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana. Tsy voatondro ao anatin’ny naoty kosa ny fidirana manaraka.
Nivaly izany ny ahiahin’ny ray aman-dreny maro. Maro tamin’izy ireo mantsy no naniry ny hampiatoana ny fidiran’ny mpianatra aloha manoloana indrindra ny fihanaky ny aretina pesta.
Tafakatra enina ireo mpitsabo arahi-maso
Mivoatra hatrany ny vaovao mahakasika ny aretina pesta ao Toamasina. Ny alahady 1 oktobra, dia nahatratra dimy ireo dokotera mpitsabo voatery napetraka tamin’ny toerana fitsaboana an’ireo olona marary tratra sy avokavoka ( Pph) Hopitaly Be. Ny antony dia ahiana ho voan’ny pesta ireo mpitsabo ireo. Ny marainan’ny alatsinainy 2 oktobra, araka ny loharanom-vaovao, dia niampy iray indray ny mpitsabo voatery naiditra ao amin’ny Pph Hopitaly Be Toamasina, arahi-maso akaiky. Tafakatra enina izany ireo mpitsabo arahi-maso.
Miezaka misoroka ny aretina ny mponina ao Toamasina. Ankoatra ny fanadiovana ny manodidina, dia tsy mifandray tanana raha mihaona eny an-dalana. Eo koa ny fisasana tanana sy tarehy amin’ny savony rehefa avy mivoaka any anaty tanàna.
Nangonin’i Vanessa sy Tatianà ary Kamy
FIHANAKY NY ARETINA PESTA ETO MADAGASIKARA
2017-10-20 17:19:18 par haikoe
tsaho entina atao hangalarana olona fotsiny io,fa aty am faritra brickaville de efa miambina an io olona io